Iindaba ezivela kwi-WordPress 3.1 - Geofumadas
WordPress 3.1 news
NgoFebruwari, 2011 ezintsha, Internet kunye neBlogs
Uhlaziyo olutsha lweWindowsPress lufikile. Izinto ezininzi zitshintshile kule nqonga yokuphathwa kwimixholo kwiminyaka yamuva, ngoku ukuhlaziywa kweenguqulelo ezintsha kuyinkinobho elula. Kulabo bahluphekayo ngoku ukwenza ngeFTP, kwezinye iimeko siye sacinga ukuba ukulula kwenza siphumelele ubabalo lwekhowudi. Kodwa kulungile kangakanani ukuba isixhobo sokusetyenziswa kwamahhala sinokukwazi ukuba nezinga lokuziphendukela kwemvelo.
Iimveli zemiba kunye nokusebenza, bebeyimfuneko kwaye njengesixhobo sokuvula, bayayithobela utshintsho oluceliwe luluntu.
Ulawulo olukhulu lwezinto esizibonayo.
Iqhosha elibizwa ngokuthi "I-Screen Options" longezwe, elikuvumela ukuba wenze ngokwezifiso oko ufuna ukubonakala okanye kufihliweyo. Inguqu enkulu nje, ngokuxhomekeke kwinto esisebenza ngayo, ixhomekeke kwaye iyancediswa kwisixhobo se-AJAX sokudonsa iipaneli.
Ngenxa yoko, ndikubonise iphaneli yokungena, khangela ukuba ndinokukhetha ukuba yeyiphi imimandla enokubonakala kuyo ukuphequlula kwaye nokuba zingaphi izithuba eziye zafakwa. Lo msebenzi ulungile kakhulu, ekubeni njengoko sifaka iplagiji, izithuba zihlala zongezwa ukuba zinciphise indawo yokusebenzela.
Unokukhetha kwakhona iindlela ezininzi ozifunayo. Khawucinge ukuba unepaneli entsha yokubhala ngaphandle kokuphazamiseka okukhulu.
Ukufikelela ngokuthe ngqo kwipaneli yomlawuli
Kuboniswe ngentla, ibha efana neBlogger, ngokufikelela ngokukhawuleza kwiphaneli, amawijethi, ukungena okusha, kukho ifom yophando kwaye ibonisa ukuhlaziywa kwamuva. Kuhle kakhulu, nangona andizange ndibone ukuba ungayilungisa indawo ethile yokuzifihla okanye ukuyifumanisa. Ndicinga ukuba ingasindisa ingozi yokuvulwa ngephutha.
Kubenamaprogram kukho ezinye iindaba ezingaphezulu kwezinto ezixhalabisa ukuba uhlaziye iiplagi eziphuhlisiwe. Ungathethi into embi, ingcono ukuyiyeka njengoko kunjalo kwaziswa.
Kukho ibhakethi ye-candy kubathuthukisi ngokunjalo, kubandakanywa yethu entsha Inkxaso yePost Formats okwenza kube lula kwiingqungquthela ukudala i-tumblelogs eziphathekayo ngeendlela ezahlukeneyo zeentlobo zezithuba, ezintsha zeCMS kufana namaphepha e-archive yemifanekiso yenkcubeko, a Ulawulo lweNethwekhi entsha, ukulungiswa kweenkqubo zokungenisa nokuthumela ngaphandle, kunye nokukwazi ukwenza I-taxonomy ephakamileyo kunye nemibuzo yenkcubeko.
Ngexesha elihle kwiindaba ze-WordPress.
Post edlulileyo«Edlulileyo Okubuyisa i-AutoCAD ws 1.2
Post Next I-Google Docs ngoku ingafunda iifayile ze-dxfOkulandelayo "